साहित्य जीवन जगतको संवेदना हो : उदय रानोहोँछा
खोटाङ्गले थुप्रै-थुप्रै साहित्यकारहरु जन्माएको छ ।खोटाङ्गले थुप्रै-थुप्रै कलाकारहरु जन्माएको छ । नेपाली साहित्य संगीतको क्षेत्रमा खोटाङ्गे साहित्य र कलालाई अलग गराई दिने हो भने, एउटा विशाल खाडल नै बन्छ ।
बिहानी पख सगरमाथालाई छोएर झर्ने चिसो सिरेटोले रुपाकोट, ट्याम्के अनि स्याल्मेको डाँडामा लुकामारी खेल्दा, तावा,रावा र साप्सुको किनार वारिपारी लटरम्म झुलेका धानका बालाहरु हावाको सुसेलीमा वयली खेल्दा उत्पन्न हुने एक प्रकारको आवाज नै हो संगीत ।
यहाको हावापानीले सिकाउछ खोटाङ्गेलाई साहित्य, यहाको वन जंगल, विकटता अनि विविधताले सिकाउछ कला खोटाङ्गेलाई । यस्तै एउटा खोटाङ्गे साहित्यकार हुन् उदय रानोहोंछा । खोटाङ्गको निर्मली डाँडा लामाखु ६ मा विक्रम संवत २०३८ साल भदौ १५ गते जन्मिनु भएको हो साहित्यकार उदय रानोहोंछा ।
माथि मेरुंग डाँडा, अलि तल साप्सुधाप अनि नजिकैको त्यो डल्ले चौतारा अनि त्यहि तल लामाखु गाउँ । त्यहि उकाली ओराली गर्दै-गर्दै उदयले वाल्यकाल बिताउनु भयो । सानै देखिको अलिक भावुक अनि सालिन हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार उदय रानोहोंछा ।
लामाखुकै जन कल्याण उच्च मा.वि बाट एसएलसी पास गरे पछाडि, उच्च शिक्षाको लागि सदरमुकाम दिक्तेल तिर जानु भयो । दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पस बाट नेपाली साहित्यमा स्नातक गर्नु भएको साहित्यकार उदयले विराटनगर बाट नेपाली साहित्यमा स्नाकोत्तर गर्नु भएको छ ।
अध्यायनकै सिलसिलामा जापान पुग्नु भएको साहित्यकार उदय रानोहोंछा एक गीतकार पनि हुनुहुन्छ । केहि समय अगाडि गायिका मेलिना राईको आवाजमा “राग मिठो” बोलको गीत सार्वजानिक गरि सक्नु भएको छ उदयले । यो गीतमा शब्द रचना मात्रै हैन, संगीत पनि उदय आफैले गर्नु भएको थियो । उनै बहु प्रतिभाको धनि उदय रानोहोंछा संग सूचना खबरको लागि ईन्द्र जिजीबिषाले गरेको कुराकानी ।
तपाईको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?
जापानको साना तिना कम्पनीहरूमा काम गर्दै बिताईरहेको छु मेरो दिनचर्या।
परदेशमा रहेर पनि साहित्य संगीतमा तल्लिन देखिनु हुन्छ, समयलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ?
छुट्टीको समयलाई सदुपयोग गरिरहेको छु
साहित्य लेख्न कहिले देखि सुरुवात गर्नु भयो ?
साहित्य लेखन बाह्र, तेह्र बर्ष बाट सुरू गरेको हुँ। स्कुलमा साहित्यिक साप्ताहिक कार्यक्रम हुन्थो जसमा भाग लिन जानि नजानी लेख्ने गर्थे।
तपाई कुन-कुन विधामा कलम चलाउनु हुन्छ ?
हाल लेखिरहेको कविता विधा हो जस्मा गद्य पद्य नै लेख्ने कोशिश गरिरहेको छु। उपन्यास पनि साहित्यको मेरो मन पर्ने विधा भएकोले यस्मा पनि कलम चलाउने सानो जमर्को गरिरहेको छु।
तपाईको बुझाईमा साहित्य के हो ?
निकै संवेदनशील प्रस्नको निम्ति धन्यवाद । साहित्यकै परिभाषालाई हेर्ने हो भने विभिन्न साहित्यविद्हरूको मतमा पारथक्यता पाईन्छ । मैले पनि साहित्यलाई आफ्नै आँखा बाट नियाल्दै आईरहेको छु । मेरो अनुसार साहित्य जीवन जगतको संवेदना हो । जहाँ जन्म र प्रकृतिको यथार्थ भोगाईहरू,सङ्घर्षहरूका जीवित अनुभूतिहरू रहन्छ । जुन भावि पुस्ताका लागि दस्ता हो। जस्ले सँधै सामाजिक भएर बाँच्न सिकाउँछ।
साहित्य लेखनमा तपाई को संग प्रभावित हुनुहुन्छ ?
यो प्रशनमा को सँग भन्दा पनि के सँग प्रभावित भन्ने सवालले महत्व राख्छ भन्ने लागेको हो।जुन म जन्मेको भूमि र त्याहाँको प्रकृतिको मनोहारिता।
जापानमा नेपाली साहित्यका पुस्तकहरु पढ्न पाईन्छ ?
पाईन्छ। केहि पुस्तकहरू आफैले बोकोर ल्याएको थिएँ। कति पुस्तकहरू जापान आउँदैगरेका आफन्त साथीभाइलाई ल्याईदिन अनुरोध गरिरहेको छु।
केहि समय अगाडी, तपाईको आफ्नै शब्द र संगीतमा, मेलिना राईले “राग मिठो” बोलको गीत पनि गाएकी थिइन् । तपाईको सांगीतिक यात्राको बारेमा केहि बताईदिनुहोस न ।
औपचारिक साधना गरेको हैन।सानै बाट गीत संगीतमा उत्कट अभिलाषा थियो।दाजु मेघराजको लग्भग एक दशक लामो संगीत साधनामा सँगै थिएँ। सो समयमा दाजुसँगै साधरण अभ्यास गरेको छु।हाल त्यसैको प्रभावले प्रयास गरिरहेको छु।
नेपाल र जापान बिच के-के कुरामा कति अन्तर पाउनु भएको छ तपाईले ?
भौगोलिक, सामाजिक,शैक्षिक,आर्थिक, संस्कृतिक र प्राविधिक रूपमा अन्तर त हुने नै भयो। अरू सोचमा अन्तर। बुझाईमा अन्तर र हरेक कार्यशैलीमा अन्तर।
नेपालीहरुले जापान संग सिक्नै पर्ने कुराहरु के-के हुन् ?
एउटा मानवले अर्को मानवलाई गरिने सम्मान र प्रकृति संरक्षण।
तपाईको आफ्नो आँखाले देखेको,भोगेको जापान बारे केहि रोचक तथ्यहरु केहि छ भने बताईदिनुहोस न ।
नेपाली हुँ। त्यसमाथि देहाती। स्वभावैले यो त लाग्ने नै भयो। जापानिजहरूमा पनि एउटा यस्तो विस्वास रहेछ। साकुरा फूललाई जापानको राष्ट्रीय फूलको रूपमा मान्ने गर्दछ। जस्लाई अङ्ग्रेजीमा cherry blossom भनिन्छ। जब यो फूल फूलिसकेर पात पलाउन थाल्छ। तब बर्षा सुरू भयो भनेर विस्वास गर्छन्।
जापानमा नेपालीहरु कति छन् ? त्याँहा रहेका नेपालीहरुको अवस्था कस्तो छ ?
डिसेम्बर २०१६ को तथ्याङ्क अनुसार (६७४७०)सर्सट्ठी हजार चार सय सत्तरी जना रहेको छ। हाल सम्म (७००००) जना भएका छन् भन्ने धेरैबाट सुने पनि यथार्थ तथ्याङ्क था भएन।
तपाईको आगामी योजनाहरु के-के छन् ?
समयको निकै अभाव छ। थोरै बचेको समयमा साहित्य सर्जन मै व्यस्त हुदै एउटा कविता कृति(सङ्ग्रह) छपाउने र एक दुई वटा गीत कम्पोज गरेको छु जस्लाई रेकर्डिङ गर्ने तर्खरमा लागिरहेको छु।
सर्वप्रथम त मेरो कविता रचना र गीतलाई पाठक वा स्रोता सम्म पुर्याइदिनुहुने सूचनाखबर डट कम प्रति कृतज्ञता जाहेर गर्दै हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहान्छु। यसका साथै मेरा छिटफुट वाहिर आएका कविताहरू पढिदिनु भयो र मेरो पहिलो प्रयासको गीतलाई सुनिदिनु भयो सबै पाठक र स्रोता महानुभावहरूमा पनि धन्यवाद। अन्त्यमा याँहाहरूको सहि सल्लाह र सुझाबको ठूलो अपेक्षा गर्दछु।
उदय रानोहोंछाको “खेस्रा” कविता पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला
उदय रानोहोंछाको शब्द संगीतमा मेलिना राईको स्वर रहेको यो गीत
‘मिस पूर्वाञ्चल’को आठौ संस्करणका लागि २६ सुन्दरीहरू छानिए
संगीतकार डिआर अटूको जोर मादल यस्तो छ (हेर्नुहोस भिडियो सहित)